मिथिलाञ्चल समाचारदाता बैशाख १४ गते, जनकपुरधाम सरकारले भद्र सहमति तोडेको भन्दै मोर्चा चुनाव हुन नदिने तयारीमा लागेको छ । महोत्तरी स्थित मोर्चा आवद्ध दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चुनाव अहिस्कार गर्ने र हुनै नदिन विभिन्न विरोधका कार्यक्रम अघि सार्ने जनाएको छ । बुधवार
दिपक कुमार पाण्डेय बैशाख १४ गते , जनकपुरधाम स्वास्थ्य मन्त्रालय अवैध नर्सिङ्घ होम सञ्चालकलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालको प्रमुखमा नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताल नजिकै झण्डै दुई दशकदेखि कृष्णा नर्सिङ्घ होम प्रा.लि. नामक अस्पताल अवैद्य रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका डा.
धनुषामा चितुवाको आक्रमणबाट आधा दर्जन व्यक्ति घाईते, आक्रमण गरेको चितुवालाई स्थानीयले मारे
दिपक कुमार पाण्डेय वैशाख १३ गते ,जनकपुरधाम । धनुषामा चितुवाको आक्रमणबाट आधा दर्जन व्यक्ति घाईते भएका छन् । मंगलबार अपराहन्न धनुषाको कटरैत बनमा घाँस दाउरा ल्याउन तथा गाई ,भैसी ,बाखा्रा चराउन गएका गोठाला माथि एक्कासी जंगलबाटै आएको एक चितुवाले आक्रमण गरेको थियो
दिपक कुमार पाण्डेय बैशाख १२ गते ,जनकपुरधाम । करिब ६ बर्ष अगाडी ऋण लिएको रकम पचाउन धनुषामा आफ्नै बहिनी ज्वाईमाथि आक्रमण गरीएको छ । धनुषाको बटेश्वर गाउपालिका २ भूचक्रपुर बस्ने ३५ वर्षका कृष्ण महतो माथि उनका आफ्नै जेठाजु लक्ष्मीनिबास १ का रामबाबु
महोत्तरीमा चुनावको वेला हातहतियार ठुलो चुनौती,जम्मा तिनजनाले बुझाए हतियार
दिपक कुमार पाण्डेय वैशाख १२ गते, जनकपुरधाम । महोत्तरीमा ३०९ जनाले अनुमति प्राप्त ३३२ हतियार राखेकोमा जिल्ला प्रसासन कार्यालयले गत महिना सुचना गरेपछि जम्मा तिनजनाले हतियार बुझाएका छन । स्थानिय निकायको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रसासन कार्यालयले गत महिनामात्र हतियार बुझाउन